नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले दिवाकर शर्माको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्नु भएको छ ।
पूर्व सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका नेता ८९ वर्षीय दिवाकर शर्माको गए राति काठमाडौँ स्थित शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा उपचारका क्रममा निधन भयो । उहाँ वि.सं. २०१५ को प्रथम आम निर्वाचनपछि माथिल्लो सभाको सदस्य रहनु भएको थियो । पर्वतको कटुवाचौपारीमा जन्मनु भएका स्वर्गीय शर्मा नेपाली कांग्रेसको पूर्व महासमिति सदस्य हुनुहुन्थ्यो । निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्धमा संघर्षरत रहँदा वि.सं. २०१८ देखि लामो समयसम्म उहाँ भारत प्रवास रहनु भएको थियो तथा स्वदेशभित्र करीब २ वर्ष जेल जीवन व्यतित गर्नु भएको थियो । स्वर्गीय शर्माले नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना र पुनस्र्थापनामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नु भएको थियो । नेपाली कांग्रेसले दिएको जिम्मेवारी उहाँले कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नु भएको थियो । स्वर्गीय शर्माका दुई छोरा र चार छोरी हुनुहुन्छ ।
स्वर्गीय शर्माको आजै पशुपति आर्यघाटमा दाहसंस्कार गरियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले पार्टीको झण्डा ओढाएर उहाँमा अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नु भएको थियो । पुशपति आर्यघाटमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रकाशमान सिंह लगायत पार्टीका नेता एवं कार्यकर्ता तथा स्वर्गीय शर्माका शुभचिन्ताकहरुले उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नु भएको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले दिवाकर शर्माको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्नु भएको छ । उहाँले भन्नु भएको छ—
“नेपाली कांग्रेसका पुराना व्यक्तित्व एवं पूर्व सांसद दिवाकर शर्माको निधनको खबरले मलाई अत्यन्त दुःखीत बनाएको छ । नेपाली कांग्रेसमा रही प्रजातन्त्र स्थापना र पुनस्र्थापनामा उहाँले निर्वाह गर्नु भएको भूमिका पार्टीमा सदा स्मरणीय रहिरहनेछ । उहाँको निधनबाट पार्टीले पुराना पुस्ताका एक कर्मठ योद्धा गुमाएको छ र यसबाट पार्टीलाई अपूरणीय क्षति पुगेको छ । उहाँको निधनप्रति म गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछु । साथै, दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै उहाँका शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछु ।”
पूर्व सांसद दिवाकर शर्माको निधनप्रति नेपाली कांग्रेस गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछ । साथै, दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै उहाँका शोक सन्तप्त परिवारप्रति नेपाली कांग्रेस हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछ ।